Mareykanka oo ku edeeyay Dowlada Iraan iney ka dambeysey Weeraradii Maraakiibta Shidaalka – Walaal24 Newss
Mareykanka oo ku edeeyay Dowlada Iraan iney ka dambeysey Weeraradii Maraakiibta Shidaalka
June 14, 2019	Off	By walaal24
Xoghayaha Arrimaha dibadda Mareykanka Mike Pompeo oo shir jaraa’id qabtay ayaa dalka Iiraan ku eedeeyay inay ka danbeysay weeraradii lagu qaaday maraakiibtii shidaalka oo mareyay Badda Cumaan ee Khaliijka.
Pompeo ayaa sheegay inay Iiraan halis ku heyso ganacsiga shidaalka adduunka, isla markaana ay ka dambeyso weerrarada lagu qaaday maraakiibta shidaalka.
Pompeo wuxuu caddeeyay in walaaca ay qabaan arrintan ay gaarsiiyeen Golaha Ammaanka Q/Midoobay, isla markaana haddii ay sii socdaan falalkan lagu weerarayo Maraakiibta, uu Mareykanku difaaci doono danihiisa iyo xulfadiisa Bariga Dhexe.
Xoghayaha Arrimaha dibadda Mareykanka ayaa sheegay in kooxda Iiraan ay taageerto ee Xuutiyiinta Yeman ay weerarro ku qaadeen dalka Sacuudiga, wuxuu sheegay in Iiraan ay tahay mid ku adeeganeysa Xuutiyiinta Yeman, weeraro halis gelin kara amniga dunida iyo dhiig daadin.
Wax caddeyn sooma bandhigin Mike Pompeo, inkastoo uu eedeymo waaweyn u jeediyey dalka Iiraan oo xiisad weyn ay kala dhaxeyso Maraykanka iyo xulufadiisa bariga dhexe, iyadoo Iiraan ay horey u beenisay eedeymaha Maraykanka oo ay ku tilmaantay kuwo lagu baneysanayo in dalkeeda lagu soo weeraro.
Ciidamada Booliiska Haramcadka oo fashiliyay Miinooyin ay -Al-shabaab soo dhigeen wadada xiriirisa deegaanka Siinka dheer iyo Ceelasha biyaha